XOG: QM, IGAD, Midowga Yurub & M/weynaha Puntland, maxay uga hadleen kulan deg deg ah oo ay yeesheen?
November 29, 2020 Farah Abdulkadir Mohamed 0
GAROOWE(P-TIMES) – Wakiilo ka socday Qaramada Midowbay, Midowga Afrika, Urur Gobaleedka IGAD & Midowga Yurub ayaa la kulmay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ay kala hadleen arrimaha ku wajahan doorashooyinka Soomaaliya, xili aan 48saac ka hor sheegnay in ay Beesha Caalamku doonayso in la dadajiyo doorashada xubnaha Aqalka Sare dhismahooda.
Wakiilada ayaa u sheegay Puntland in loo baahan yahay dhameystirka xubnaha guddiga Doorashooyinka Heer Dawlad gobaleed, iyo wada shaqeynta in la dadajiyo, iyadoo diiradda la saarayo in doorashada waqtigeeda lagu qabto.
Kulanka intii uu socday Puntland ayaa soo jeedisay in la xaliyo tabashooyinka oo ay muhiim tahay dhamaan in dhinacyadu heshiisyada la gaaray meelmariyaan, balse waxay Wakiilada caalamiga ah cadeeyeen in loo baahan yahay in wadar Soomaalidu ay arrimahaas go’aan uga gaaraan.
Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa saacado ka hor hosta ka xariiqay in loo baahan yahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto ayna tahay dhammaan dhinacyadu in ay ka shaqeeyaan, waxaana safarada xubnahan ay ku tageen Garoowe ay ka dhigan tahay in ay dhammaan mari doonaan dawlad gobaleedyda.
Madaxweynaha Puntland ayaan wali magacaabin 8da xubnood ee Guddiga doorashooyinka Heer dawlad gobaleed, xili ay saacadihii u dambeeyey soo baxayeen warar sheegaya in uu magacaabi doono, haddana wali ma dhicin, iyadoo lafilayo in uu dhinaca kale ka eegayo kooxaha musharaxiinta oo dhawaan walaac muujiyey.
Hadii Madaxweynaha Puntland magacaabo xubnahan 8da ah ayaa ka dhigan in doorashadu ku qabsoomi doonto Puntland, ayna taasi dhabarjab ku noqonaysa dhanka Jubbaland & Midowga Musharaxiinta oo u arka caqabad weyn oo ku soo korortay haddii Puntland aqbasho cadaadiska caalamiga ah.